Birao fanaraha-maso indostrialy China Fitaovana fivarotana sy orinasa feno turnkey | KAISHENG PCB
PCBFuture dia manome ny tsara indrindra amin'ny PCB fabrication sy Assembly services. Manana fiarovana ESD feno sy serivisy fitiliana ESD notarihan'ny mpiasa matihanina izahay. Nandritra ny folo taona lasa, PCBFuture dia nitombo hatrany ary nitombo satria nanolo-tena foana izahay hanome ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra sy ny kalitaon'ny vokatra.
Vy Coating: MANDEHA MAIMAIMPOANA
Fitaovana fototra: FR-4 tg135
Fitaovana metaly: MIDITRA MAIMAIMPOANA Fomba famokarana: SMT + Sosona: PCB 2 sosona
Fitaovana fototra: FR-4 tg135 Fanamarinana: SGS, ISO, RoHS MOQ: Tsy misy MOQ
Karazana solder: tsy misy firaka (mifanaraka amin'ny RoHS) Serivisy tokana: fivoriambe PCB ambany Fitsapana: Fitsapana 100% AOI / E-test / Visual
Teny lakile: Serivisy fivoriambe PCB, fizotry ny fivoriambe PCB, Mponina PCB, mpanamboatra solika PCB, fanalahidy
Fa maninona no mifidy ny serivisy fivoriambe PCB?
1. Amin'ny ampahany-Turn-Key, azonao atao ny manafatra ny PCB sy ny singa ampahany. Ny injenierantsika dia manana traikefa fanamboarana PCB am-polony taona maro mba hiantohana ny fametrahana ny faritra mifanaraka amin'ny filan'ny arintany sy ny mekanika.
2. PCBFuture dia afaka manome PCB miboridana avo lenta sy fivorian'ny birao vita pirinty amin'ny vidiny mifaninana amin'ny tolotra miavaka sy ny fandefasana ara-potoana.
3. Miaraka amin'ny loharanom-pahalalantsika sy ny traikefanay dia manana izay ilaina izahay hihaonana ny filàn'ny tetikasanay manomboka amin'ny foto-kevitra ka hatrany amin'ny famokarana ary ho mpiara-miasa amin'ny injenieran'ny elektronika feno na lehibe na kely ny tetikasanao.
Serivisy fivoriamben'ny boriborintany mihodina
Fanaraha-maso kalitao sy fivoriambe farany
1. Tsy tokony hividy mora vidy fitaovana faharoa sy fitaovana sandoka ianao. Tokony hividy amin'ny orinasa mpamokatra orinasa voatendry sy fantsona ofisialy hafa ianao, toa ny Dejie, Mouser, Arrow, sns.
2. Ireo fitaovana novidina dia tsy maintsy ampitahaina amin'ny famokarana BOM hahazoana antoka fa marina ny marika sy ny maodely;
3. Raha tsy milaza ny fepetra takiana ny mpanjifa, ny fitaovana novidina dia novokarin'ny mpanamboatra ofisialy tsara indrindra, ary azo antoka ny kalitao;
4. Ireo fitaovana novidina dia tokony hojerena mba hanamafisana ny fiasan'ny fitaovana araka ny tokony ho izy;
5. Ireo fitaovana novidiana dia tokony tahirizina araka ny antonony mba hisorohana ny olana amin'ny kalitao toy ny hamandoana noho ny fitahirizana fitaovana tsy mety.
1. Ny ambaratongam-pahaizana manokana momba ny orinasa.
2. Fanentanana amin'ny serivisy.
3. Traikefa amin'ny indostria.
4. Ny vidin'ny fanodinana PCBA dia mangarahara.
Manampy sy mihaino ary manohana izahay miaraka amin'ny fomba mavitrika hanampy anao handresy amin'ny tsena mifaninana. Mikasika ny vidinay, ho hitanao izy ireo izay mora vidy indrindra. Raha manana fanontaniana na manontany ianao dia aza misalasala mifandraysales@pcbfuture.com , hamaly anao izahay ASAP.
Teo aloha: Fivoriamben'ny boriborintany haingam-pandeha FPGA
Manaraka: Fivoriamben'ny birao fizarana fitaovana
Fivoriamben'ny Pcb Turnkey